मुसिकोट नगर सभापति शाक्यव्दारा नगर सचिव सापकोटा निर्घात कुटिए ! – ebaglung.com
मुसिकोट नगर सभापति शाक्यव्दारा नगर सचिव सापकोटा निर्घात कुटिए !
२०७५ जेष्ठ ९, बुधबार १८:२९	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७५जेठ ९ । स्थानियवासीका अनुसार नेपाली कांग्रेस गुल्मीका मुसिकोट नगर सभापति सुदर्शन शाक्य बन्धुहरुको दादागिरीले स्ययं आफ्नै कार्यकर्ता समेत असुरक्षित हुँदै आएका छन् । केहि दिन अघि वामी टक्सार बजारमा एक दलित र उनकी श्रीमतीलाई निर्घात कुटपिट गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरी उनै सभापति शाक्य र उनका भाईहरु संसार र सन्तोष शाक्य मिलेर आफ्नै पार्टीका नगर सचिव ४६ वर्षिय खगेश्वर सापकोटालाई आज विहान मरणाशन्य हुने गरी कुटपिट गरेका छन् ।
रुद्रवेणी वामीटक्सार सडक खण्ड विस्तार गर्ने क्रममा सडक विभागले सापकोटाको खेतको रुख ढलाएको थियो । उनको उक्त रुख शाक्यको खेतमा ढलेको थियो । उक्त रुख छिटो नहटाएको रिस ईवी साँधेका सभापति शाक्यले सापकोटा संग वाद–विवाद गरेको र केहि बेर पछि आफ्ना दुई भाईहरुलाई बोलाई तिन जना मिलेर आफुलाई निर्घात कुटेको घाईते सापकोटाले बताए ।
स्थानिय तहमा उपचार हुन नसकी उनलाई अहिले केहि वेर अघि वामीटकसर प्रहरीले जिल्ला अस्पताल गुल्मी ल्याई पुराएको छ । वामीटक्सार प्रहरी चौकीमा मिलाउन नसकि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत ल्याईएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घाईते सापकोटाको दुवै आँखा, नाक र मुखमा निला डाम छन भने शरीरका विभिन्न भागमा लात्ती मुड्कीको असर स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जसलाई सभापति शाक्य भन्छन मलाई कुट्ने क्रममा उ लडेर ढुङ्गामा ठोक्किएर त्यस्तो भएको हो ।
उनले भने–‘ उसको रुख ढलेर मेरो खेतमा रहेको छ । मैले मकै छर्न पाएको छैन, रुख हटाउ छिटो भनेर राम्रो मुखले भन्दा उसले मलाई हातपातको प्रयास ग¥यो त्यस पछि मात्र मैले भाईहरुलाई बोलाएको हुँ । ’
चार महिना अघि वामीटक्सार वसपार्कमा गाडी चढ्न ढिला आएको रिसमा उनै शाक्य बन्धुहरुले मुसिकोट ८ , वामी मैदानका वावुराम परियार र उनकी श्रीमतीलाई निर्घात कुटेर अहिले सापकोटालाई जतिकै घाईते बनाउँदा पनि सभापति सापकोटाले परियार जाँड खाएर जथाभावी वोलेको र सामन्य लछार पछार मात्रै भएको बताएका थिए ।
पछि भने आफुहरुले कुटपिट गरेको स्वीकार गर्दै अव त्यस्तो कार्य नगर्ने भन्दै कागज पत्र गरी उपचार खर्च ब्यहोरेका थिए । त्यसको चार महिना पनि नवित्दै अर्का ब्यक्ति त्यो पनि आफ्नै पार्टीको नगर सचिव कुटिनुले शाक्य बन्धुहरुबाट वामीवासी आतंकित हुँदै आएको स्थानिय समाज सेवीहरु बताउँछन् ।
कुटिएका सापकोटा २०६३ साल देखि खिलध्वज पन्थी अध्यक्षमा निर्वाचित नहुने वेला सम्म नेपाल तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष समेत थिए । उनि पछिल्लो चरण काठमाण्डौंमा अस्थाई वसोवास गर्ने भएकोले गुल्मी कांग्रेसको ५० दिने महाअभियानमा भने खटिएका थिएनन् ।
घर बनाउका लागि केहि दिन अघि घर आएकोले पार्टीको महाअभियानमा सक्रिय हुन सकिन र पनि नेपाली कांग्रेस प्रति पुर्ण समर्पित कार्यकर्ता हुँ तर नेता बाटै यसरी कुटिनु प¥यो’–सापकोटाले भने ।
तस्वीर- जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन आएका घाईते सापकोटा
निसीखोलाका ३ र ४ नम्बर वडा कार्यालय एकै कोठा एकै सचिवव्दारा सन्चालन !
स्नातक उत्तीर्ण युवतीको करामत : एकातिर सम्वन्ध विच्छेद, अर्कोतिर विवाह गरेको २८ दिनमा सन्तानको जन्म !